Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Culinary » Ezi zezona ziXeko ziPhambili zeFoodie eMelika ngo-2021
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iiwayini kunye neMimoya
I-Post-COVID-19, ezinye iivenkile zibonakala ngathi zizama ukutsala abathengi ngokubanika ukhetho olonwabisayo kunye nolonwabisayo ngexabiso lexabiso lokuthenga. I-Foodies kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo kufuneka itshekishe iimenyu zeyure eyonwabisayo kwezinye iivenkile zabo abazithandayo.
Ngaphezulu kwe-180 yezona zixeko zikhulu zase-US zithelekisiwe kumashumi amabini anesithoba eemetri eziphambili.
Iseti yedatha isusela kukufikeleleka kunye nokufikeleleka kweendawo zokutyela ezikumgangatho ophezulu ukuya kwiminyhadala yokutya ngomntu ngamnye ukuya kubugcisa bokuthengisa utywala kunye neewayini ngomntu ngamnye.
Ziqhutywa zizikhalazo zobhubhane, amaziko amaninzi aye afudukela kwimimandla engaphandle, ebandakanya encinci, useto olusondeleyo, kunye noku-odola ngaphandle konxibelelwano.
Ngo-Okthobha 16 ukuba Ukutya kwehlabathi uDay kunye namaxabiso erestyu anyuka nge-5.4% phakathi kukaJulayi 2020 noJulayi 2021, abahlalutyi beshishini namhlanje bakhuphe ingxelo yabo ngee-2021's Best Foodie Cities eMelika, kunye nokuhamba nengcaciso.
Ukufumanisa ezona ndawo zibalaseleyo nezinexabiso eliphantsi zokutya kwasekhaya, iingcali zithelekisa ngaphezulu kwe-180 yezona zixeko zinkulu zase-US kwi-29 metric eziphambili. Iseti yedatha isusela kukufikeleleka kunye nokufikeleleka kweendawo zokutyela ezikumgangatho ophezulu ukuya kwiminyhadala yokutya ngomntu ngamnye ukuya kubugcisa bokuthengisa utywala kunye neewayini ngomntu ngamnye.
Iidolophu ezingama-20 eziphezulu ze-Foodie eMelika
1. IPortland, OKANYE 11. ILos Angeles, CA
2.Orlando, FL 12. ISan Diego, CA
3. IMiami, FL 13. IPortland, ME
4. ISan Francisco, CA 14. I-Oakland, CA
5. UAustin, TX 15. IWashington, DC
6. ISacramento, CA 16. ISt. Louis, MO
7. IDenver, CO 17. IGrand Rapids, MI
8. ILas Vegas, iNV 18. IChicago, IL
9. Seattle, WA 19. IAtlanta, GA
10. ITampa, FL 20. IHouston, TX
Eyona nto ibhetele kakhulu
Orlando, EFlorida, ineyona ndawo ivenkile yokutya okukhethekileyo (nganye ingcambu yabemi), 0.4529, eyi-19.4 ephindwe kaninzi kunePearl City, eHawaii, isixeko esinezona zimbalwa kwi-0.0234.
IOrlando, eFlorida, ineyona ndawo yokutyela (kwindawo nganye yabemi), 7.23, ephindaphindwe kangange-18.1 kunakwisiXeko sasePearl, eHawaii, isixeko esinezona zimbalwa zi-0.40.
IOrlando, eFlorida, ineyona ice cream kunye neevenkile zeyogathi ezibandayo (kwisikwere sabantu ngasinye), 0.3566, ephindaphindwe ngama-49.5 ngaphezulu kweSouth Burlington, eVermont, isixeko esisesona sinembalwa kwi-0.0072.
ISanta Rosa, eCarlifonia, inowona mgangatho uphezulu weendawo zokutyela ezifumana iinkonzo ezikhawulezayo kwiindawo zokutya okukhawulezayo, 1.72, ephindaphindwe kangangezihlandlo ezi-3.2 kunaseJackson, eMississippi, isixeko esineyona ndawo iphantsi e-0.54.